महिनौ पछि फेला परेको बालकको परिवारमा छायो खुशी ! जयन्ती राईबाट आयो फेरी ठुलो सहयोग (हेर्नुस् भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/महिनौ पछि फेला परेको बालकको परिवारमा छायो खुशी ! जयन्ती राईबाट आयो फेरी ठुलो सहयोग (हेर्नुस् भिडियो)
करिब १ महिना अगाडी भक्तपुरबाट हराएका बालक फेला परेपछि निकै हर्षित भएका आमाबुवालाई जयन्ति राईले ५० हजार दिएकी छिन् । मिडिया मार्फत जयन्ति राईसहित अन्य व्यक्तिहरुले गरेको सहयोग आज प्रकाश र कबितालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त सहयोग रकम छोराको पढाईको लागि खर्च गर्ने बताएका छन् ।
भक्तपुरको ब्यासीमा बस्दै आएका प्रकाश लिम्बु र कबिता लिम्बुका १० बर्सिय छोरा प्रवेश लिम्बु र अर्का ११ बर्सिय बालक फेला परेका हुन् । हराएको १३ दिनदेखि नौबिसेको एउटा होटलमा काम गर्दै गरेको अवस्थामा दुई बालक फेला परेका हुन् ।
कहाँ गएको हो भन्ने पत्तो नभएको र यत्रो दिन बितीसक्दा पनि नभेटेपछि आफ्नो छोरा हराएर बिलौना गरिरेहेका लिम्बु दम्पत्ति मिडियामा आएका थिए । बालकहरु बेपत्ता भएपछि बालक प्रवेश नभेटेपछि रुँदै उनकी आमा कविताले रुँदै छोरा भेटे यो बिरानो काठमाडौँ छोड्ने बताएकी थिईन् । छोरालाई भेटेपछि कवितासँगको कुराकानी हेर्नुस् तलको भिडियोमा :